DEG DEG+DAAWO: Puntland oo ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah S/land,Ciidanka oo heegan la geliyay & Sool iyo Sanaag oo Xiisad dagaal ka jirta – Puntlandtimes
Wararka aan ka heleyno Gobolada Sool iyo Sanaag ayaa sheegaya in Ciidanka Puntland ay si weyn u adkeeyeen Difaacyada ay ku leeyihiin deegaanada Goboladaasi ka dib markii dhowaan Somaliland Ciidamo u soo dirtay.
Wasiirka amniga Puntland ayaa amar ku bixiyay in la adkeeyay ammaanka deegaanada Gobolada Sool iyo Sanaag,islamarkaana la iska jiro dhagar kasta oo kaga timaada dhanka maamulka Somaliland.
Maamulka Jeegaanta ayaa dhowaan amray in ciidan badan la geeyo deegaanada Gobolada Sool iyo Sanaag oo ay ku muran san yihiin Puntland iyo Somaliland.
Hhhhhh niyada udhis shacabka niyad jabay ee 10 sano maqalayey puntland oo amar bixisay hhhhhh toliw amarku mid aan fuliin ba niyad dhis.com
riwaayadaa horaa dadka ugu8 dhigteen degdeg iyo waa lagu dhawaaqay dagaal sl dadka u sheeg in ciidankii pl afurur ka yaaceen oo carmo orod ku galaan dhowr argagaxisada shabaabna qabsadeen
Anakaa Warka Fulaynimada Puntland hayna iyo Sida Ciidankeedii Al-Shabaab ugasoo Baacsadeen Af-urur oo ah halkii Pl looga Dilay boqolka Askari ee la gawracay.
Carmo ayay Maliishiyadii Puntland u yaaceen iyagoo Naftooda la Firxaday
June 8, 2019Boosaaso (Caasimada Online)-
Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in xubno ka tirsan ururka Al Shabaab ay la wareegeen deegaan muhiim ah oo ku dhow magaalada Boosaaso.
Ururka Al Shabaab ayaa baahiyay in xubno iyaga ka tirsan ay la wareegeen deegaan istiraatiiji ah oo hoos taga magaalada Boosaaso, kaasi oo lagu magacaabo degaanka Af Urur.
Al Shabaab ayaa baraha Internetka ku baahiyay in ciidamada Puntland ay isaga carareen deegaanka, kadibna aysi toos ah ula wareegeen gacan kuheynta deegaanka Af Urur ee gobolka Bari.
Waxay sidoo kale Al Shabaab ay baahiyeen in ciidamada Puntland ay ka carareen awooda Al Shabaab, islamarkaana uusan jirin wax dagaal ah oo ka dhacay deegaanka Af urur.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Punland ee isaga baxay deegaanka Af Urur ay gaareen degmada Carmo, dadka deegaanka ayaa sheegay in ururka Al Shabaab ay baaritaanno ku sameeyeen xarumihii ay faarujiyeen saraakiisha Puntland.
Deegaankaan iyo deegaano kale oo dhowr ah waxaa horey ugu dagaalamay Al Shabaab iyo Puntland, waxaana Al Shabaab dagaalkaasi looga qabtay maxaabiis badan oo wali qaarkood ku xiran xabsiyada Puntland.Sidoo kale Al Shabaab ayaa dagaaladaasi guulo ka sheegay iyadoo sheegay in ku dhawaad 100 askari ay kaga dileen ciidamada Puntland.
Ma jiro wax war ah oo wali kasoo baxay maamulka Puntland ee gobolkaBari ee ku aadan sheegashada Al Shabaab ee ah inay la wareegeen deegaanka Af urur.
Maxaad uga Dhacdeen Warkaa Fulaynimadiina muujiyay?
Anaga waxaad ogtihiin inaananu danaynayn Faankiinee Nimankaa iska dhiciya ma naxayaasha ah ee Sidii Xoolaha idiin gawracaya ee wada Mjteenka ah
Sanaag Bari Waad Arki doontaan Sidaanu ula wareegno ee u nimaadno duleedka Boosaaso iyo Qardho.
Markaasaa Laydiinka baahan yahay hadal ee ha odhanina Waan argagaxnay sidiinii.
Faana ma daayaan Hadhowna Carar ma daayaan.
Wariyaha BBC ee Garoowe Axmed Cawil Jaamac oo Xaqiijiyay In dagaal Al-shabaab kula wareegtay Af-urur,halka Maliishiyadii Puntland Ku andacoodeen xeelad dagaal ayaanu uga digo roganay
ardayga saaqidka ah ayaa ku marmarsiiyooda nalooma dhigin iyo macalinkaa ila cola intaana ma daayo,puntlandna ma dayso xeelad dagaalbaa looga soo baxay iyo somalilandbaa taageerta iyo faan ceerigaabo ayaan qabsanaynaa iyadoo rasaasta af urur laga maqlayo boosaaso